साधनाले जन्माएको ‘सुरेन्द्र’ – Puleso
साधनाले जन्माएको ‘सुरेन्द्र’
By:puleso Published Date: बुधबार, बैशाख ५, २०७५
भर्खर जुंगाको रेखी बसेको । हेर्दा २४-२५ वर्षको जस्तो देखिने । निकै फूर्तीलो र हँसिलो तर सरल जीवनशैली भएका सुरेन्द्र अमात्यसँग कुराकानी गर्न हामीले पुलेसोको अफिसमै बोलाएका थियौं । उनी भनेकै समयमा आए । समयको बारेमा उनी निकै सचेत रहेछन् । सायद उनको सफलताको मुख्य कारण यहि थियो कि ?
हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने झैँ गायक सुरेन्द्र आमात्य सानैदेखि गीत-संगीतप्रती रुचि राख्थे । उनको सपना नै भविष्यमा गायक बन्ने थियो । ३ ४ कक्षा पढ्दादेखि नै गीत गाउन धेरै रहर गर्ने उनी स्कुलमा हुने गीत संगीतको प्रतियोगिताहरुमा भाग लिन्थे । सानैदेखि गीत गुनगुनाउने लत बसेको सुरेन्द्रलाई गीतप्रतिको मोहले छोड्दै छोडेन । उनलाई स्कुल पढ्दैगर्दा बन्दना मिसले निकै हौसला दिनुभएको रहेछ । ” उहाँ दृष्टि विहिन भएरपनि केही गर्ने सपना र हिम्मत गर्नुहुन्थ्यो त्यसले मलाई पनि निकै प्रेरणा मिल्यो ।” सुरेन्द्रले भावुक हुँदै भने ।
एक दिन उनी कलेजमा टेबल ठोकेर गीत गाउँदै थिए । साथीहरुलाई सुरेन्द्रको स्वर राम्रो लागेछ । ए ! सुरेन्द्र तिम्रो स्वर मिठो छ, कतै गएर गीत रेकर्ड गर । तिमी सक्छौं । साथीहरुको यो हौसलाले उनलाई छटपटी भयो । मन उचालिन थाल्यो । रहर वर्षाको भेल झै भएर आयो । रोक्न सकिने अवस्था नै भएन । भन्ने बित्तिकै कसले गीत रेकर्ड गर्न दिन्छ ? उनी त्यसैपनि नयाँ थिए । उनको त्यस क्षेत्रमा न कोहि चिनेजानेको मान्छे थियो न आफन्त नै कोहि त्यस क्षेत्रमा लागेका थिए । तर इच्छाले डोर्याए पछि गन्तव्यमा पुग्ने बाटो जीवन आफैले खोज्दो रहेछ । त्यस्तै भयो सुरेन्द्रलाई पनि । त्यसपछि सुरेन्द्रको पनि सुरुभयो गीत संगीतको साधनाको यात्रा ।
साथिभाईको हौसला र सल्लाहले उनले किर्तिपुरका भोकल प्रशिक्षक गुजय मालाकारसँग ४ वर्ष सम्म भोकल सिके । भोेकलकासाथै जमल राष्ट्रिय नाचघरमा उनले ६ महिना गितारको प्रशिक्षण पनि लिए । आफूले देखेको सपना हासिल गरेरै छाड्ने सुरेन्द्रको दृढता थियो । उनी पोख्त बन्न चाहन्थे । आफूले आफूलाई निखार्न चाहन्थे । तर कसरी ? उनीसँग रेडिमेड कुनै उपाय थिएन । यसै क्रममा उनले भेटे रेडियो नेपालका मदन सिंह नेपाली । उनी थिए गीतार प्रशिक्षक । सुरेन्द्रले मदन गुरुसँग करिब ६ महिना गीतार सिक्ने मौका पाए । मदनसँग गीतार सिकेपछि सुरेन्द्रको आत्मबल निकै बढ्यो ।
गायक बन्ने रहरमा उनले भोकलको साथसाथै गितार समेत सिक्दै गए । उनले आफ्नो भोकल क्षमता थप वृद्धि गर्न पुतलीसडक स्थित शान्ति इन्टरटेनमेन्टबाट ६ महिना भोकल सिके । हाल न्युरोडमा बस्ने हार्मोनियम माइला को इन्स्टिच्युटबाट गितार प्रशिक्षण लिइरहेका छन् ।
न्युरोडमा हार्मोनियम माइलाले बाजागाजाको पसल खोलेका थिए, जुन पसल नै नेपालको पुरानो वाद्ययन्त्र पसल हो । अहिले हार्मोनियम माइला त छैनन् । उनका पाँच नातिले हजुरबुबाको पुख्र्यौली पेसालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । सुरेन्द्र आफूलाई निखार्न चाहन्थे । तर धेरै ठाउँमा भौतारिदा पनि उनलाई गीतार सिकाइको भोक मेटिएको थिएन । अहिले हार्मोनियम माइलाको उनलाई चित्त बुझेको छ । आज, त्यसैले सुरेन्द्रलाई गायक र मोडल बनाएको छ । जीवनको नयाँ पहिचान दिलाएको छ । उनले त्यहाँ गीतार सिक्दै गर्दा ‘कीर्तिपुरको मोहनी’ बोलको गीत रेकर्ड गराए । त्यो नै सुरेन्द्रको साङ्गीतिक यात्राको सुरुवात थियो ।
सुरेन्द्रले लगत्तै अर्को गीत ‘हाम्रो यो जिन्दगी’ रेकर्ड गराए । उनले हाल नयाँ वर्षको अवसरमा तामाङ सेलो गीत बजार मा सार्वजनिक गरेका छ्न् । नेपाली जातजातीबीच भइरहेको विभेदलाई हटाएर भाइचारा र सद्भाव कायम गर्न यो गीत गाएको बताउँछन् ।
रहर लागेर साङगेतिक यात्रामा लागेका अमात्य आधुनिक र पप गित गाउन विशेष रुचि राख्छन् । धेरै जसो एकल गीत गाएका उनी अब भने केहि फरक किसिमको गीत गाउने तयारीमा छन् । आफूले गाएका गितहरुमा आफै मोडलिङ गरेका उनी स्वंयम पनि एक मोडल हुन् ।
नेपाली सांगितक बजारमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाँउदै गरेका सुरेन्द्रले यो दिनसम्म आइपुग्न धेरै मिहेनत गरेका छन्। केही गर्छु भन्ने तीव्र आकांक्षा राखेर गीत संगीतको क्षेत्रमा होमिएका उनी निरन्तर यस क्षेत्रमा लागिरहने बताउँछन् । जहाँ साधना, साधना र साधनाबाहेक अरु कुनै कुराको लागि स्थान छैन् ।